Ny ampitson’i Madagasikara araka ny Banky iraisam-pirenena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? il y a 10 heures
P.Prospère il y a 14 jours
Rehefa mifarana toy izao ny taona, dia anisan’ny fanao ny « jery todika ny lasa mba hamaritana ny ho avy ». Nanolotra ny jery tombana iny taona 2020 iny ny Banky iraisam-pirenena mba hanampy ny mpitondra hanangana ny ampitso raha tiana ny handroso fa tsy ho difotry ny krizy mavesatra.
Tsy miolakolaka ny filazana fa « ny fiantraikan’ny voka-dratsin’ny COVID 19 dia mitovitovy amin’ny zava-misy niainan’ny firenena ny taona 2009, izany hoe, voafafa indray mipy maso ny dingana vita tao anatin’ny 10 taona ho an’ny ady amin’ny fahantrana ». Raha adika amin’ny politikan’ny Filoha Andry Rajoelina izany dia izao : « tsy ho tratra ilay fahatarana nandritra ny 60 taona nahazoana ny fahaleovan-tena fa nihemotra folo taona fanampiny ho amin’ny fahantrana bebe kokoa indray ny firenena ; na koa hoe, tsy ho vitantsika ny hametraka an’i Comores na ny firenena faran’izay mahantra ho any amin’ny laharana faha-21 aorianantsika. Izany hoe, mbola tsy hita taratra hatreto ny paik’ady hanatrarana ny tanjona tian’ny mpitondra hatao. Tsy misy politikam-panarenana sady hifehezana ny krizy no manosika mavitrika ny toe-karena.
Manamafy izany ny filazan’izy ireo fa olona maherin’ny efatra hetsy sy iray tapitrisa (1.4 million) no tafalatsaka anaty fahantrana mangitsoka. Ao ny very asa, ao ny very fidiram-bola, noho ny politikan’ny fihibohana an-tanàn-dehibe. Izany hoe, ny fanokafana ireo orinasa samihafa (PharMalagasy, SASM….) dia tsy afaka nitondra vahaolana arak’asa ho an’ny tsy an’asa, ary tsy afaka nitondra fidiram-bola ho an’ny very fihinanana. Tsy vitan’ny fanjakana ny mitsinjara ny vola fanampiana amin’ny alalan’ny famoronana asa, na dia an-tselika aza mba hiparitahan’ny vola any an-tanan’ny mpanjifa sy ny tsena, hanome vitrika ny fifanakalozana ara-barotra. Manjaka ny ampihimamba.
Inona moa izany no fepetra raisin’ny fanjakana hiarovana ny antom-piveloman’ny maro tsy hanjakan’ny fahasahiranana sy ny vesatry ny krizy sy valan’aretina ? Etoana dia asa, sakafo, vola miditra ho kirakiraina no resaka ; ny amerikanina moa dia nanapaka hevitra ny hanokana 900 miliara dolara ho fitsinjovana ny vahoaka any aminy. Fa ho antsika kosa, hatraiza ny fiantraikan’ireny tosika fameno ireny amin’ny toe-karena sy ny fihariana ? Manoloana izany àry dia tsy maintsy mihevitra fanovan-drafitra matanjaka sy fanarenana mahomby ny fanjakana mba hanomezana tanjaka ny toe-karena, hiarovana ireo marefo sy hampandehanana ny fiainam-piaraha-monina. Raha tsy izany, ho zary vesatra tsy ho zakan’ny firenentsika indray ny olana ara-tsosialy samihafa. Mitombo ny olona « tsy tohinina » ary mora mifandramatra anaty herisetra ny olona. Marefo ny firaisan-kinam-pirenena ankehitriny. Santionany izay niseho tany Imerintsiatosika. Ny tandroka aron’ny vozona indray no navadiky ny olona ho fahavalo. Nanjo ny fitondrana Rajaonarimampianina izany tamin’ny resaka Soamahamanina. Mila jerena koa ny politika ara-bola mba tsy ho ny fitrosana no ianteherana ho fanarenana na hanome tanjaka ny sandam-bola. Tsy maintsy ialana ny politika lakalaka ifotorana amin’ireo andrin’ny fiainam-pirenena, toy inona no fidiran-ketra, ny fifandraisana iraisam-pirenena. Mbola ny fitombon’ny harin-karena ve no handrefesana ny fahombiazana ? Ahoana ny politikan’ny fampiasam-bola na dia amin’ireo fotodrafitrasa handrefesana ny fiantraikany amin’ny ady amin’ny fahantrana sy ny fampandrosoana?
Mila fiovam-penitra mahery vaika araka izany na ny fitantanana, na ny politikan’antoko, na ny politikan’ny vola, na ny fanatsarana ny fomba fiasa na ny fananganana orinasa. Mitaky asa mahavokatra manko ny tsena vao afaka manao dokam-barotra.
Réforme en vue : Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? - il y a 10 heures
Matoan-dahatsoratra : Tambajotra mafia, manondrana harem-pirenena ! - il y a 4 jours
Matoan-dahatsoratra : Madagasikara afaka no mandroso ! - il y a 7 jours